खशोग्गीलाई साउदी युवराजले किन भने 'खतरनाक'? - Everest Dainik - News from Nepal
खशोग्गीलाई साउदी युवराजले किन भने ‘खतरनाक’?
पत्रकार खशोग्गी बेपत्ता भए यता शङ्काको सियो बारम्बार साउदी राजपरिवारतिर सोझिने गरेको छ ।
टर्कीले त उनको हत्यामा साउदी दरबारको हात रहेको हुनसक्ने संकेत सुरुदेखि नै गर्दैछ । तर उसले तोकिसकेको अवस्था भने छैन । उता साउदी सरकारले भने यसमा राजपरिवारको संलग्नतालाई खण्डन गर्दै आइरहेको छ ।
यसैबीच साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले अमेरिकासँग पत्रकार खशोग्गी निकै ‘खतरनाक’ रहेको भनेको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।
सुरु देखि नै खाशोज्जीको अवस्थाबारे आफू अनजान रहेको र इस्तानबुलस्थित साउदी दूतावासमा आएपछि उनी सकुशल फिर्ता गएको बताइरहेको साउदीले उनको हत्या भइसकेको स्वीकार गर्नुभन्दा पहिला युवराजले अमेरिकासँग यस्तो कुरा गरेको हुनसक्ने बताइएको छ ।
युवराजले व्हाइट हाउससँगको टेलिफोन वार्तामा खशोग्गी ‘मुस्लिम ब्रदरहुड’ नाम गरेको कट्टरपन्थी इस्लामिक संगठनसँग आबद्ध रहेको बताएका थिए ।
तर साउदी अरेबियाले भने वाशिङ्टन पोस्ट र न्यू योर्क टाइम्समा प्रकाशित विवरणहरूको खण्डन गरेको छ ।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका लागि काम गर्ने साउदी नागरिक खशोग्गी साउदी सत्ताका प्रमुख आलोचक थिए ।
टर्की, अमेरिका र साउदी अरेबियाले खशोग्गीको हत्या गत अक्टोबर २ मा इस्तानबुलस्थित साउदी वाणिज्यदूतावासमा भएको मानेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस भेटियो खशोग्गीको शव, दूतावासभित्रै मारिएको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार
तर उनको शरीर अझै भेटिएको छैन ।
आफ्नो देशको राजपरिवार उनको हत्यामा संलग्न नभएको दाबी साउदी अरेबियाले गरेको छ। उसले तथ्य पत्ता लगाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ ।
केही हप्ताअघि राजकुमार मोहम्मदले सो घटनालाई ‘अपराध’ भन्दै त्यसबाट सबै साउदीलाई पीडा भएको बताएका थिए।
युवराजले फोनमा कससँग के कुरा गरे ?
वाशिङ्टन पोस्टका अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनसँगको फोनवार्तामा राजकुमार मोहम्मदले खशोग्गी मुस्लिम ब्रदरहुड नाम गरेको अन्तर्राष्ट्रिय इस्लामिक सङ्गठनका सदस्य भएको दाबी गरेका थिए।
खशोग्गी बेपत्ता भएको एक हप्तापछि अक्टोबर ९ मा सो कुराकानी भएको बताइएको छ।
मोहम्मदले अमेरिका र साउदी अरेबियाको गठबन्धन जोगाउन ह्वाइट हाउसलाई आग्रह पनि गरेको बताइएको छ।
खशोग्गीको परिवारले सो पत्रिकालाई एउटा विज्ञप्ति पठाउँदै खशोग्गी आफैँले बारम्बार त्यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका थिए भन्दै उनी मुस्लिम ब्रदरहुडको सदस्य थिए भन्ने दाबीको खण्डन गरेको छ ।
“जमाल खशोग्गी कुनै पनि रूपमा खतरनाक व्यक्ति थिएनन् । त्यसविपरीत दाबी गरिनु निरर्थक हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आजसम्म भएको अनुसन्धानको उपलब्धि ?
खशोग्गीको मृत्यु कसरी भयो भन्ने विषयमा एक मत छैन ।
टर्कीकी महिला हाथिजे जेङ्गिजसँग विवाह गर्न कागजपत्र मिलाउन उनी आफ्नो देशको इस्तानबुलस्थित वाणिज्यदूतावास गएका थिए ।
त्यहाँ प्रवेश गर्नासाथ खशोग्गीको घाँटी थिचेर हत्या गरिएको र उनको शरीर पूर्वयोजनानुसार टुक्राटुक्रा पारिएको दाबी बुधवार टर्कीले गरेको थियो ।
टर्कीका सञ्चारमाध्यमले यसअघि खशोग्गीलाई यातना दिइएको विवरण प्रकाशित गरेका थिए ।
साउदी अरेबियाले खशोग्गीको मृत्युबारे आफ्नो बोली फेर्ने गरेको छ ।
उसले खशोग्गी साउदी वाणिज्यदूतावासबाट आफैँ बाहिर गएको दाबी गरेको थियो ।
पछि उसले उनको हत्या भएको स्वीकार्‍यो । योजनाबद्ध रूपमै भएको सो हत्यामा सरकारी पक्ष वा राजपरिवारको संलग्नता भने नरहेको उसको दाबी छ ।
सो घटनामा संलग्न भएको भन्दै १८ जना सन्दिग्ध व्यक्तिलाई समातिएको छ ।
उनीहरूलाई साउदी अरेबियामै मुद्दा चलाइने बताइएको छ तर टर्कीले उनीहरूलाई इस्तानबुललाई सुम्पिनुपर्ने माग राखेको छ ।
गत हप्ता राष्ट्रपति रेजेप ताय्यिप एर्दोआनले साउदी राजा सलमानसँग कुरा गरेका थिए। उनीहरूबीच सो घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने सहमति भएको थियो ।
के भन्छ विश्व समुदाय ?
याे पनि पढ्नुस लेबनानी प्रधानमन्त्रीको अपहरण गरेको आरोप लागेपछि साउदी युवराजको यस्तो प्रतिक्रिया
खशोग्गी हत्या प्रकरणका कारण साउदी अरेबियाले आलोचना खेप्नु परेको छ । उससँग सहकार्य गरिरहेका राष्ट्रले पनि त्यस विषयमा उत्तर खोजेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले साउदी अरेबियाको भनाइसँग आफू सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाएका छन् ।
तर साउदी अरेबियासँगको हतियार बिक्रीको लोभलाग्दो सम्झौता गुमाउन आफूले नचाहेको उनले बताउँदै आएका छन् ।
बिहीवार अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले खशोग्गीको हत्यामा संलग्नहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउन अमेरिकालाई पर्याप्त जानकारी सङ्कलन गर्न केही हप्ता लाग्ने बताएका थिए ।
एउटा स्थानीय रेडियोमा बोल्दै उनले अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच गहिरो र दीर्घकालीन रणनीतिक सम्बन्ध रहेको र त्यो कायम राख्न अमेरिकाले प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
फ्रान्सका विदेशमन्त्रीले खशोग्गीको मृत्युको घटना एउटा निन्दनीय अपराध भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
फ्रान्स साउदी अरेबियासँगको आर्थिक सम्बन्धमा फ्रान्स निर्भर नरहेको भन्दै उनले प्रतिबन्ध लगाउने सङ्केत दिएका छन् । तर त्यसबारे विस्तृत विवरण दिइएको छैन ।
यूकेका विदेशमन्त्रीले सो घटनाले साउदी अरेबियालाई विभिन्न विषयमा दबाब दिन अमेरिका र यूकेलाई अवसर दिएको हुनसक्ने टिप्पणी व्यक्त गरेका छन् ।
ट्याग्स: jamal khashoggi, Mohammad bin Salman, turkey